Tag: kuzvishandira | Martech Zone
Makambani eB2C anoonekwa seanotungamira-mumhanyi munzira dzevatengi analytics. Nzira dzakasiyana senge e-commerce, vezvenhau vezvenhau, uye nharembozha dzakabvumidza mabhizinesi akadaro kuveza kushambadzira uye nekupa rakanakisa vatengi mabasa. Kunyanya, yakazara data uye epamberi analytics kuburikidza nemuchina kudzidza maitiro akagonesa B2C masystems kuti anyatso kuziva maitiro evatengi uye nezviitwa zvavo kuburikidza neInternet masystem. Kudzidza kwemuchina zvakare kunopa chinobuda chinogoneka kugona kuwana ruzivo pane vatengi vebhizinesi. Nekudaro, kutorwa nemafemu eB2B
Imwe nzira yekuvandudza kuchengetedzwa kwevatengi uye kugutsikana kwevatengi kwakazara kugadzira zvigadzirwa zvinobatsira vatengi kuzvibatsira. Kwete chete kuti pane kuvandudzwa kwekugutsikana kwevatengi, pane yakananga mutengo-chengetedzo inosanganisirwa nevatengi vasingasunge yako vatengi vatengi mitsara. Kuburitsa yako base base, mibvunzo inowanzo bvunzwa, snippets uye mienzaniso uko injini dzekutsvaga dzinogona kuzviwana dzinoita izvi zviitike - kwete kuzviisa kumashure kwekupinda nekutya kwevanokwikwidza kuzviwana. Zvidzidzo zvenguva pfupi zvinotaurira
Kana iwe wakaita seni, unozvidza kubata nebasa revatengi. Hazvirevi kuti ini handidi vanhu - vanoita nepavanogona napo. Asi kazhinji kazhinji kwete, ini ndinoziva zvakawanda nezve dambudziko randinomhanyira kupinda kwavari. Ini ndinovenga kugara parunhare ndakabata kwemaminetsi mashanu, ichiteverwa nehurukuro kwemaminetsi gumi nemashanu, ichiteverwa nekukwira uye kumirira kwakawanda uye tsananguro. Nyaya zhinji ndinozvigadzirisa, kana ndinotendeukira kwadziri